E-News Nepali || Fast and Accuracy » आयो खुशीको खबर: गौतम बुद्ध अन्तरास्ट्रिय विमानस्थल बैसाख बुद्ध पुर्णिमा देखि संचालनमा..! हेर्नुहोस, (भिडियो)
आयो खुशीको खबर: गौतम बुद्ध अन्तरास्ट्रिय विमानस्थल बैसाख बुद्ध पुर्णिमा देखि संचालनमा..! हेर्नुहोस, (भिडियो)
काठमाडौं । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी बुद्ध पूर्णिमादेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । विमानस्थल निर्माण आयोजनाले बुद्ध पूर्णिमादेखि विमानस्थल सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएको हो । यद्यपि यसको औपचारिक निर्णय भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नुपर्नेछ ।
“टर्मिनल भवनमा अहिले फिनिसिङ र उपकरण जडानको काम भइरहेको छ । त्यस्तै धावनमार्गको सिभिल निर्माणतर्फको काम सबै सकेर अहिले लाइट जडानको काम अगाडि बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । समग्रमा विमानस्थलको भौतिक प्रगति करिब ८५ प्रतिशत रहेको उहाँले बताउनुभयो । सबै उपकरण आइसकेको र जडानको काम मात्र बाँकी रहेकाले अब भौतिक प्रगति स्वतः बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति २९ मंसिर २०७६, आईतवार १५:०९